Obere Arcana Tarot Kaadị Kaadị | Tarot Ọgụgụ - Tarot Kaadị Pụtara
Obere Arcana Tarot Kaadị Kaadị
libra nwanyi na pisces nwoke na nwanyi
Ebe Isi Arcana kọọ akụkọ njem mkpụrụ obi na mbara igwe, the Obere Arcana na-akọwa eluigwe na ala .
N’echiche, ha bụ ụzọ okporo ụzọ gị; nkọwa kemmiri ihe na-eme ezigbo akụkọ! N'okpuru, pịa uwe Tarot ịchọrọ ịmụtakwu banyere! Pịgharịa gaa na ala ma ọ bụ pịa ịmụ banyere Minor Arcana akara na ihe ọ pụtara !
Minor Arcana Symbolism & Pụtara
The Minor Arcana na-akọwa anụ ahụ, mmetụta uche, ọgụgụ isi, na mmụọ nke eluigwe na ala. Ha na-atụpụta ọnọdụ, ihe omume, ihe ịma aka, na ihe mmụta a ga-amụta na ndụ a. Oge ụfọdụ, ha na-egosikwa ndị mmadụ akpọrọ aha.
Na Osisi Ndụ, ha na-anọchi anya isi ihe, ma ọ bụ Sephiroth, na akụkụ dị iche iche ha. Major Arcana, n'aka nke ọzọ, bụ ụzọ jikọtara Sephiroth. Ya mere, ịghọta ihe Minor Arcana pụtara na akara ya dị ezigbo mkpa na ịgụ tarot n'agbanyeghị na enwere ike ịgụ akwụkwọ siri ike site na iji Minor Aracana ma ọ bụ Isi Arcana .
E kewara Minor Arcana na 4 suut nke kaadị 14:
Uwe ọ bụla kwekọrọ na otu n'ime ihe anọ alchemical:
Pentacles - Wa
Iko - Mmiri
Mma-agha - Ikuku
Achọrọ - Ọkụ
N'usoro a, ihe ndị ahụ na-anọchikwa ụwa gị, mmetụta uche, nsogbu ma ọ bụ esemokwu, na omume.
N'oge gara aga, a na-ejikwa obere obere Arcana mee ihe iji mata klaasị mmekọrịta mmadụ na ibe ya;
Pentacle - ndị ahịa na ndị ọchụnta ego
Iko - ndị ụkọchukwu na ndị ndu ime mmụọ
Mma agha - ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị (ndị isi) na ndị agha
Wands - ndị ọrụ na ndị ọrụ ugbo
E kewara uwe ọ bụla n'ime 10 'pip cards' (Ace through 10) na kaadị ụlọ anọ (Page, Knight, Queen, and King).
Aces na-ese onyinyo isi ihe dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, Ace of Pentacles bụ mkpụrụ akụ na ụba ma ọ bụ ọdịmma n'ụzọ nkịtị. Iri iri ahụ na-anọchite anya mmepe zuru ezu nke uwe.
Chee echiche banyere akụkọ a na-agwa gị na ọgụgụ dị ka usoro a n'ụzọ:
'Mkpụrụ ahụ a kụrụ na ihe Ace nke Pentacles mechara ghọọ osisi dị ike na kaadị 10 nke Pentacles. Kaadị etiti (2-9) bụ ọkwa dị iche iche nke uto yana ihe niile a ga-amụta n'etiti.
Kaadị ụlọ ikpe nwere ike ịpụta mmadụ, mana ọ bụghị mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, peeji ndị ahụ na-anọchite anya ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị na-eto eto (a na-akpọ ha adaeze na ụfọdụ oche) na ndị knight, ụmụ okorobịa. Ndị Queens na-anọchite anya ụmụ nwanyị tozuru etozu na ndị Eze, ụmụ nwoke tozuru etozu.
Mana site n'echiche nke esoteric, ha na-anọchi anya akụkụ dị iche iche nke uwe ọ bụla. Akụkụ ndị a sitere na ọnọdụ ha na Osisi Ndụ.
Peeji a b u Earth, nke putara na Page nke mma agha bx akuku nke ikuku. Chee echiche banyere anwụrụ ọkụ na-esure ihe nsure ọkụ mgbe ị na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-atụgharị uche. Akụkụ ya na-adịghị mma ga-adị ka oke ifufe aja ma ọ bụ ekwensu.
Ndị Knights bụ akụkụ ikuku nke mmewere, Queens the Water akụkụ, na Eze ndị Fire.
Minor Arcana Na rotgụ Tarot
Obere Arcana na-emeso ihe, ihe ukwu na obere ihe na-eme kwa ụbọchị.
Kaadị tarot a metụtara ọrụ dịka akụnụba, ndụ mmekọrịta gị, ịhụnanya, na atụmatụ gị niile. Ha metụtara ajụjụ ndị ọzọ, dị ka nkà ihe ọmụma, omume na ụkpụrụ omume, ma ọ bụ nkwenkwe okpukpe na nke mmụọ gị dịka ha si emetụta gị ebe a ugbu a.
Dị ka a na-achị, Minor Arcana ga-akarị Major Arcana mgbe niile n'ịgụ ihe. E kwuwerị, ị na-etinye ihe ka ukwuu ná ndụ gị na ụwa nkịtị. Mgbe enwere obere Minc Arcana na mgbasa, ị na-enweta ụfọdụ ozi dị ike sitere na mbara igwe.
Ọ bụrụ na ị na-enweta ọtụtụ ụdị kaadị ndị a na-agụ akwụkwọ, Tarot na-adọrọ uche gị gaa n'akụkụ ụfọdụ nke ndụ gị. Kaadị Pentacle anọ ma ọ bụ karịa na-ekwu, na-ekwu na mgbasa ozi 10 nke Celtic Cross gbasaa, ga-egosi nrụpụta dị mkpa na ọnọdụ gị, dịka ahụike ma ọ bụ ọganihu. Nke ahụ nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ajụjụ gị enweghị ihe jikọrọ ya na nke ahụ.
Kwuo na ịchọrọ n'ezie ịma ihe gbasara ndụ ịhụnanya gị ma ugbu a ị hụrụ ụyọkọ Pentacles - mana o nweghi iko ọ bụla. Dabere na kaadị ndị akọwapụtara, nke a nwere ike ịpụta na a ga-enyocha ego tupu ị nwee ike iche maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị - ma ọ bụ na ego gị ma ọ bụ ahụike gị ugbu a zuru oke iji dọta ịhụnanya.
N'otu aka ahụ, mgbe ị hụrụ atọ ma ọ bụ karịa n'otu nọmba na-agbasa, payaa ntị na ihe atụ ahụ na ihe ọ pụtara ( Nọmba ). Ndi mmadu na-ekwuputa mmalite ohuru, ebe Fives na-ekwu ihe ndi puru ime n'okporo uzo. Nines nwere ike inye ozi gbasara afọ ime na-aga n'ihu, mana ha na-atụkwa aro na mmepe ga-adịte aka na-abịa na njedebe.
Mgbe ị hụrụ ọtụtụ kaadị ụlọikpe (Page, Knight, Queen, King), lezie anya maka ndị ọhụụ na-abata na ndụ gị. Oge ụfọdụ, kaadị ọ bụla ga-egosi onye dị iche, mana ha nwekwara ike tụọ aka n'akụkụ dị iche iche nke ụdị onye ahụ.
nwoke libra na nwanyi sagittarius na enwe mmekorita
ụzọ ndụ 6 na 6 ndakọrịta
na-enwe mmekọahụ ma nwee mmekọahụ na nwanyi